Dugsiyada degmooyinka oo maamulayaal qaaliya soo ijaarta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gobolada ugu badan oo ey dhibtaani soo foodsaari doonto ayaa waxaa ka mid ah Västernorrland, Gotland, Jämtland iyo Stockholm. sawir: Susanne Lindholm
Dugsiyada degmooyinka oo maamulayaal qaaliya soo ijaarta
La daabacay tisdag 31 oktober 2017 kl 10.21
Iskuulada degmooyinka ayaa waxaa dhibi ka heysataa sidii ey u qoran lahaayeen maamulayaal dugsiyada degmooyinkaas maamusha.
Tusaale ahaan degmada Nynäshamn ayaa dhowr jeer waxaa khasab ku noqotey in ey maamule dugsi ka soo ijaartaan shirkadaha shaqaalaha ijaara, taas oo degmadaas ugu kacdey lacag aad iyo aad u farabadan.
Warbixin ka soo baxdey ururka macalimiinta ayaa lagu muujiyey in tobanka sanoo soo socota , ilaa iyo inta laga gaarayo sanadka 2028-ka, ey isku celcelin dalkaan Sweden hawlgab noqon doonaan tobankii maamule dugsiba afar ka mid ah.
Gobolada ugu badan oo ey dhibtaani soo foodsaari doonto ayaa waxaa ka mid ah Västernorrland, Gotland, Jämtland iyo gobolka Stockholm, kuwaas oo boqolkiiba konton maamulayaasha dugsiyada ee goboladaas ka hawlgalaa ey hawlgab noqon doonaan.
Su’aal weyn ayaa ka taagan sidii loo heli lahaa maamulayaal dugsi oo buuxiya boosaskaas ey ka baneyeen dadkaas hawlgabka noqdey ee gacanta ku hayey maamulka iskuulo farabadan.
Tusaale ahaan degmada Nynäshamn ayaa waxaa khasab ku noqotey in ey saddex la taliyo oo dugsiyada maamula ka soo ijaartaan shirkad ka mid ah kuwa shaqaalaha ijaarta. Kharashka dhankaas degmada uga baxey ayaa qiyaastii 10 000 ilaa iyo 15 000 oo karoon bishiiba ama nus malyuun karoon sanadkiiba, ka badnaa haddii ey degmadaasi heysan laheyd maamule joogta ah oo ey shaqaale ahaan hawshaas ugu qorato.
Anna Eriksson waa maamule iskuul oo ka hawlgasha degmada Nynäshamn, waxayna sheegtey in maamulada dugsiyada oo si isdaba joog ah loo badbadalaa ey ridada dheer dhibaato uga tageyso tayada dugsiyadaas:
- Wax fiican ma aha meel shaqo ka socoto oo maamulkiisa sare habacsanaani ey ka jirto, waxaana qabaa in dhibaatadaani ey mustaqbalka sii siyaadi doonto taas oo aan ku ekeyn oo kaliya degmada Nynäshamn balse dalkaan Sweden oo dhan saameyn ku leh, ayey tiri Anna Ariksson.